မင်းသွေး ရုတ်တရက် သေဆုံးခဲ့ပုံကို ပြောလာတဲ့ ကောင်းထက်ဇော်
มุมมอง 401 888
95%3614 176
သရုပ်ဆောင် မင်းသွေး Heart Attack ဖြစ်စဉ်တွင် အတူတူ ရှိနေခဲ့သူ၊ ဘောလုံး အတူတူ ကန်ခဲ့သူ၊ ဆေးရုံသို့ ကိုယ်တိုင် လိုက်ပို့ဖြစ်ခဲ့သူ ကောင်းထက်ဇော် က မင်းသွေး ရုတ်တရက် သေဆုံးခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို MC သို့ အခုလို ပြောပါတယ်။
Myanmar Celebrity Update: Presenter & Actor Kaung Htet Zaw talks about actor Min Thway accidence. #MinThway #KaungHtetZaw #MyanmarActor
Mg Mg3หลายเดือนก่อน
Ss Ss3หลายเดือนก่อน
Øpën Open Mee5หลายเดือนก่อน
Mayaminam Nadoorim5หลายเดือนก่อน
How old is him? R.I.P
Han Aung5หลายเดือนก่อน
toto toto5หลายเดือนก่อน
ma may5หลายเดือนก่อน
Hla Hla Pyone5หลายเดือนก่อน
လွမ်း တယ်5หลายเดือนก่อน
ကျနော်တို့ရွာမှာ ဖြစ်ဘူးတယ်တောင်ပေါ်ကိုနွားနဲ့သစ်ခုပ်ကအပြန်မှာအိမ်ရောက်တော့မနက်၁၁နာရီလောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နွားကလဲရေငပ်လာတော့လှဲဖြုတ်ပြီးနွားကိုရေ တိုက်လိုက်တာချက်ရှင်းသေသွားတယ် နောက်တော့သိသွားတယ်ရောက်ရောက်ရှင်းဘယ်သူမှမတိုက်ရဲကြတော့ဘူး
True Love ဆရာတော်တရားတွေအကုန်လုံးကိုအရမ်းကြိုက်တယ်ဘုရား5หลายเดือนก่อน
April Lulu5หลายเดือนก่อน
Fighter Gyi5หลายเดือนก่อน
kim te5หลายเดือนก่อน
galaxy a55หลายเดือนก่อน
မယုံနိုင်သေဘူး အကိုမင်သွေးရယ့် စိက်မကောင်ဘူး
သံစဉ်ချို ไทย5หลายเดือนก่อน
Ayeaye Moe5หลายเดือนก่อน
khin. khin Di Polmm5หลายเดือนก่อน
မို့ပြ မုဆိုး5หลายเดือนก่อน
J7 Pro5หลายเดือนก่อน
ကောင်းရာသုဂတိ ရောက်ပါစေ ကိုမင်းသွေး ကျနော်ဆုတောင်းပေးပါတယ် ခင်ဗျား..
ကမ္ဘာတည်စေမဲ့ သစ္စာ တရား5หลายเดือนก่อน
ရေနင်သွားတာနေမှာ ရေနင်ရင်လည်း ထမင်းနင်တာထက်ဆိုးတယ်
Pi Pi5หลายเดือนก่อน
အခုမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိထားမ်ိတယ် ကျွန်တော်ဆို ခနခန ဖြစ်တတ်တယ်ဗျာ ရေသောက်လိုက်ရင် ရေတွေက အလုံးလိုက်ဝင်သွားသလိုခံစားရတယ် ပီးတော့ ရင်ဘတ်မှာ အရမ်းနာနေတတ်တယ် အခုမှပဲ ကြောက်စိတ်ဝင်လာတယ် အမြဲတမ်းလည်းတွေးမိတယ် ဘာလို့အခုလိုတွေဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ
Wiin zz หลายเดือนก่อน
Pi Pi 😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Wai Lin Tun5หลายเดือนก่อน
ကျွန်တော်လဲတခါတလေ အဲ့လို ဖြစ်ဖူးတယ် ၁မီနစ်လောက်ကိုရင်ဖက်ကြီးအောင့်နေတာ
Dim Boih5หลายเดือนก่อน
San San5หลายเดือนก่อน
Hsu Yati Mon5หลายเดือนก่อน
Rip Min Thway... So sad.sate ma kg woo
Hla Yamin Thaw5หลายเดือนก่อน
Mw Mw5หลายเดือนก่อน
Kyaw Wana5หลายเดือนก่อน
thin thinyu5หลายเดือนก่อน
အဲ့လို့ရုတ်တရပ်ဆို အရေးပေါ် CPR လုပ်ပေးလို့မရဘူးလား😔
Yujui Wang5หลายเดือนก่อน
စိတ်မကောင်းပါဘူး ကောင်းရာ သု့ဂတိ့ရောက်ပါစေ
สิมธิชัย เยาวกรณ์5หลายเดือนก่อน
Ko Ko Phyo U5หลายเดือนก่อน
Sam Samမမေ့ကြဖို့ရည်ရွယ်5หลายเดือนก่อน
thwphu phu thw5หลายเดือนก่อน
AUg AUg5หลายเดือนก่อน
Gamer4Life5หลายเดือนก่อน
Khine Nwe5หลายเดือนก่อน
ko thu5หลายเดือนก่อน
ရေကို အလောတကြီးသောက်လိုက်လို့ ရေ လမ်းကြောင်းလွဲသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ပါတယ်ဗျာ စိတ်မကောင်းပါဘူး
kyaw zin Oo5หลายเดือนก่อน
Mohd Nur Alam Shah Alam5หลายเดือนก่อน
Nod Mobile5หลายเดือนก่อน
Min Chan5หลายเดือนก่อน
ko San Htite5หลายเดือนก่อน
အ​မောဆို့ပြီး​သေတာ​လေ တနည်းအားဖြင့်​​ပြောရရင်​ ​သေချင်းဇိုးနဲ့​သေတာ​ပေါ့ ဟ်ဟ်​
+aye aye ​ရေ လူ​တွေ အားလုံးက ​သေမျုိးချည့်​ပဲ ​ကောင်းတဲ့ ​သေချင်းနဲ့​သေချင်​ရင်​​ကောင်းတာလုပ်​​ပေါ့ အဲ့​ကောင်​က မ​ကောင်းတာ​တွေပဲ လုပ်​ခဲ့လို့ ​သေချင်းဆိုးနဲ့​သေတာ အဲ့တာ ဝမ်​နည်းစရာမရှိဘူး ဟ်​ဟ်​
aye aye5หลายเดือนก่อน
ko San Htite ညီပြောနေတာ အဆင့်မဟုတ်ဘူးအကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ပြောပြတာ
​ဖေလိုးမ​လေး အဆင့်​ဆိုတာ ဘာလဲ ​သေချာ ခွဲခြားတတ်​ရဲ့လား
ko San Htite အစ်ကို သေမှသိလိမ့်မယ် အစ်ကို့ မှာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိတာ သေချာတယ်
BABY LOVE5หลายเดือนก่อน
Eh doh soe Soe5หลายเดือนก่อน
Su Hlaing Lai5หลายเดือนก่อน
Khine Nyine5หลายเดือนก่อน
Thu Zat5หลายเดือนก่อน
Zun Zay5หลายเดือนก่อน
စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ ကောင်းရာသုကတိရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
sanket mudaww5หลายเดือนก่อน
張貼婷婷5หลายเดือนก่อน
မောနေတဲ့အချိန်ရေကိုများများမသောက်ရဘူး ရေကို နဲနဲဘဲသောက်ရတာ ဖြစ်ရလေစိတ်မကေါင်းပါဘူး ကေါင်းရာသုကတိရောက်ပါစေ
မိုးသက်နိုင် နိုင်မင်းအောင်5หลายเดือนก่อน
thazin tun5หลายเดือนก่อน
koko lay5หลายเดือนก่อน
ko aung5หลายเดือนก่อน
ကောင်းမွန်ရာ ရောက်ပါစေ ကိုမင်းသွေး ရာ
ဒါ​ဗေ့မဲ့ အ​ဆောင်​ပြန်​ပြီး တစ်​နာရီ​လောက်​​တော့.လှဲ​နေရတယ်​
​ရှော့ဝင်​တာဆိုတာ ကျ​နော်​သိပြီး ဆက်​မ​သောက်​​တော့ဘူးဗျ
mung No5หลายเดือนก่อน
မကုန်​ဘူးဗျ တစ်​မိနစ်​အတွင်းမှာတင်​ ​ချွေးသီးကြီး​တွေကြလာ​တော့ မူးတူးတူး မိုင်​တိုင်​တိုင်​နဲ့ဗျာ
Ma Lay5หลายเดือนก่อน
အလုပ်​က ပင်​ပန်းလို့ဆိုးပြီး အလုပ်​အ ပြန်​မှာ ဘီယာ တစ်​လုံး​သောက်​ခဲ့ ဖူးတယ်​
Khawn Ja Aung Lungpu5หลายเดือนก่อน
Ty Ti5หลายเดือนก่อน
Nan aye Thein5หลายเดือนก่อน
Soe Man5หลายเดือนก่อน
စိတ်မကောင်းပါဘူး ကိုမင်းသွေး ကောင်းမွန်ရာဘုံဘဝရောက်ပါစေ
Alinn Yong5หลายเดือนก่อน
တကယ် စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ....စိတ်မကောင်းတာကလွဲပီလဲ...ဘာမှ မတက်နိုင်ဘူး..အကို မင်းသွေး တစ်ယောက် ကောင်းရာဘုံဘဝ ရောက်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးမယ်
Tin Tin5หลายเดือนก่อน
aye thin5หลายเดือนก่อน
သွေးသစွာ သွေးသစွာ5หลายเดือนก่อน
Ba jan Pj5หลายเดือนก่อน
တကယ်စိတ်မကောင်းဘူးကိုမင်းသွေးရယ် ခုထိမယုံနိုင်ဘူးဗျာ😭😭 ကောင်းရာသုဂတိရောက်ပါစေကိုမင်းသွေး😭😭😭😭😭😭😭
fai zal khan5หลายเดือนก่อน
swe night song5หลายเดือนก่อน
So sad. ..
The Pro5หลายเดือนก่อน
ရေသောက်လို့ဖြစ်မယ် စာမှာဖတ်ဖူးတာ အားကစားလုပ်သူတွေ လုပ်ပြီးရင်ရေချက်ခြင်းမသောက်ရဘူးတဲ့ ကစားနေချိန်မှာနှလုံးခုန်နှုန်းမြန်တယ် ရေသောက်လိုင်ရင် ရှေ့ာဖြစ်တယ် ဆေးစာအုပ်မှာဖတ်ဖူးတာလေးပါ။
po po po po5หลายเดือนก่อน
နေပူထဲပြန်လာရင်လည်း ရေချက်ခြင်းမချိးရဘူး ရှော့ဖြစ်တက်တယ်. မောနေတဲ့အချိန်လည်းရေချက်ခြင်းမသောက်ရဘူး ၃မိနစ်လောက်နားပြီးသောက်ရတယ်
Phuo Phuo5หลายเดือนก่อน
+Rakhaing Thar Min MInj
Haymannsaung Haymann5หลายเดือนก่อน
Rakhaing Thar Min MIn5หลายเดือนก่อน
ဖြစ်နိုင်ပါတယ် များသောအားဖြင့် ဘောလုံးသမားတွေ သောက်တဲ့ ရေဗူးတွေက ပိုက်တပ်ထားတာ ဖြစ်တယ်
Yin Nwet Hnin5หลายเดือนก่อน
Ma San5หลายเดือนก่อน
Yoe N5หลายเดือนก่อน
win kyi5หลายเดือนก่อน
maung toe5หลายเดือนก่อน
kaung lay5หลายเดือนก่อน
Pan Pan5หลายเดือนก่อน
Icee Phone5หลายเดือนก่อน
Theint Lay5หลายเดือนก่อน
ေ လးစားပါတယ် ကိုေ ကာင်းထက်ေ ဇာ်ေ ရ
ဇာတ်ကားတစ်ကားအ တွက် အသက်တေ ချာင်းလုံးေ ပးလိုက်ရတာမတန်ဘူးကွာ
Moe Moe5หลายเดือนก่อน
ဘောလုံးကန်ရင် ရေမသောက်ဘူးme boyfriend
Laurie Smith5หลายเดือนก่อน
ရေကို အရှိန်နဲ့မော့သောက်လိုက်လို့များ ရေနင်သွားသလားမသိဘူးနော် ရေနင်ရင်လဲ နှလုံးရပ်တပ်ပါတယ် ဆရာဝန်တော့ဟုတ်ဘူး တွေးကြည့်တာပါ
Kyaw Khat4หลายเดือนก่อน
Y2K ,5หลายเดือนก่อน
ရေနင်တာမဟုတ်ပါ ကျနော်တို့ကတော့ ရေဝင်လွဲတာလို့ခေါ်ပါတယ် အခန့်မသင့်ရင် အသက်ဆုံးရှုံးတတ်တာပါ..ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖူးတယ်...သေချိန်မတန်လို့သာ အသက်ရှင်တာ...
Aung Aung5หลายเดือนก่อน
The Pro ဟုတ်မယ်ထင်တယ် သုံးသပ်ကြည့်တာပါ ကျန်မကိုယ်တိုင် ရေတစ်ခါနင်ဘူးတယ် မေမေနဲ့တူတူ ညနေ၅နာရီလောက်မှ လမ်းလေးလျှောက်အပြေးပေါ့ လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်နေရင်း မေားလို့ဆိုပြီး လက်ထဲကရေဘူးကို အရှိန်နဲ့ မော့သောက်လိုက်တာ အသက် အဝင်အထွက်ရှုလို့မရတော့ဘူး တစ်ကိုယ်လုံးတုံးလာတယ် ခြေကားယားလက်ကားယား ဖြစ်သွားတယ် ပါးစပ်လဲ ပွင့်မရတော့ဘူး ဖင်ထိုက်ရပ်ပြုတ်ကြသွားတယ် စက်ကန့်ပိုင်းလေးပဲ သေပြီလို့ယူစလိုက်တယ် စကားလဲပြေားလို့မရတော့ဘူး မေမေက သူလဲဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတော့ သူသိတယ်လေ ချက်ချင်ဆိုသလိုပဲ နောက်ကနေပြီး ကျေားကိုထုခြလိုက်တယ် ဆက်တိုက်ပေါ့ နားခေါင်းထဲရော ပါစပ်ထဲရေားပဲရေတွေထွက်ကြလာတယ် သေနေ့မစေ့သေးလို့ပဲလားတော့မသိဘူး မေမေက အနားမှာရှိနေတော့ ချပ်ချင်းကူနိုင်တယ်လေ ပြေားမပြတပ်လောက်အောင်ပါပဲ တော်တော်လေးတော့ခံစားလိုက်ရတယ် မလွယ်ဘူး ချပ်ခြင်းငရဲပြည်ရောက်သွားသလိုပါပဲ မေမေပြေားတယ် အနားမှာ ချပ်ချင်းကူပေးတဲ့လူမရှိရင် စက်ကန့်ပိုင်အတွင်းသေနိုင်တယ်တဲ့ မေမေ ပြေားတယ် ရေ ကိုဘယ်တော့မှ အရှိန်နဲ့ မော့မသောက်ရဘူးတဲ့ တစ်ငုံပြီး တစ်ငုံ မျိုခြရတယ်တဲ့လေ အခုတော့ မေမေပြေားသလိုပဲသောက်တော့တယ် တော်တော်လေးကိုကြောက်သွားတာ အမှန်ပါပဲ သူပြေားနေပုံအရဆိုရင် ကိုမင်းသွေးဖြစ်သွားတာနဲ့တူနေတယ်လေ
Rakhine Tha Cha5หลายเดือนก่อน
Far from way5หลายเดือนก่อน
kjop You ခရိုနီ5หลายเดือนก่อน
Soe Min5หลายเดือนก่อน
Ma Magyi995หลายเดือนก่อน
Rip စိတ်မကောင်းဘူး 😔😟😧
Mt Phone5หลายเดือนก่อน
အကို​ပြောပြတာကိုနား​ထောင်​ပီ မျက်​ရည်​​တောင်​၀ဲမိပါတရ်​ အရမ်းကိုစိတ်​မ​ကောင်းဖစ်​ရပါတရ်​
Baby Lay5หลายเดือนก่อน
khing min khant5หลายเดือนก่อน
ngaimaung maung5หลายเดือนก่อน
ဘောလုံးကန်လို့အမောဖောက်သေတယ် ဟာသပဲ ဟုတ်မှလဲပြောပါ ဆေးရုံမှာဆေးမှာထိုးပြီးသေတာပဲ ဖြစ်မယ် အလောင်းကိုခွဲစိတ် စစ်ဆေးရင်ကောင်းမယ် မြန်မာပြည်ဆေးရုံးဆို ဘယ်ဆေးရုံ ဆရာဝန်မှမယုံရဘူး ချီးထပ်တွေချည်းပဲ
bo yan5หลายเดือนก่อน
Nway Oo Ni Ni5หลายเดือนก่อน
Than Naing5หลายเดือนก่อน
ဖြစ်သွားလို့ပြောကြတာပါလူတွေက Mobile5หลายเดือนก่อน
မင်းသွေး အတွက် နှမျော မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ သက်မွန်မြင့်၊ မင်းသက်စံ
ကောင်းထက်ဇော် မင်းသွေးရဲ့ နောက်ဆုံးစကား နောက်ဆုံးဆန္ဒ
มุมมอง 198 986
မမသင်ဇာ ကို အကယ်ဒမီ ရစေချင်တဲ့ မောင်လေး ဟိန်းမင်းသူ
အကုန်သိသတင်းဌာနရဲ့ အကယ်ဒမီ ကြိုတင်ခန့်မှန်း
ပါးစပ်မပိတ်ရအောင်ရီနေရတဲ့ ကျော်ကျော်နဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦးတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးရဲ့ အခွီအင်တာဗျူး
ပိုက်ကျော်ခြင်း ဘာဆိုလား+ ရဲလွင်မိုး+အာကာ Vs ကြက်ဥ+ဘယ်းလေ+စပလိမ်
အကုန်ပြင်ဆင်ပြီးမှ အကယ်ဒမီပွဲ မတက်ဖြစ်တဲ့ ခင်သဇင်
သရုပ်ဆောင် သူထူးစံ (အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု)
အနုပညာရှင်တွေ လာရောက်သတင်းမေးနေတဲ့ မင်းသွေးရဲ့နေအိမ်
มุมมอง 703 967
มุมมอง 22 564 948
มุมมอง 602 785
มุมมอง 1 939 573
มุมมอง 26 162 512
มุมมอง 1 341 447
มุมมอง 305 188
มุมมอง3411 378
มุมมอง 1 175 662
มุมมอง 1 076 179